“Somaliland Waxay Innaga Baryayeen Inay Kenya Ka Furato Xafiis Magaaladda Hargeysa, Waanu U Diidnay…” Hoggaamiyaha Isbahaysiga Thirdway Alliance Ee Kenya – somalilandtoday.com
“Somaliland Waxay Innaga Baryayeen Inay Kenya Ka Furato Xafiis Magaaladda Hargeysa, Waanu U Diidnay…” Hoggaamiyaha Isbahaysiga Thirdway Alliance Ee Kenya
(SLT-Hargeysa)-Hoggaamiyaha Isbahaysiga Thirdway Alliance ee dalka Kenya, Dr. Ekuru Aukot, ayaa dawladda Kenya ku dhaliilay inay ka gaabisay sidii ay xidhiidh diblomaasiyadeed ula yeelan lahayd Jamhuuriyadda Somaliland.
Dr. Ekuru Aukot oo ka hadlayey dood ka baxday Telefishanka Ebru TV Isniintii la soo dhaafay oo lagu falanqeynayey xiisadda ka dhalatay cilaaqaadka Kenya iyo Soomaaliya oo xumaaday toddobaadkii la soo dhaafay, waxaanu caddeeyey in Kenya ay Xafiis diblomaasiyadeed uga furan weyday Somaliland, iyadoo tixgelinaysa wax uu ugu yeedhay Jamhuuriyadda Argagixisada ah ee Soomaaliya.
“Somaliland waxay innaga baryeysay in ay Kenya ka furato Xafiis Hargeysa, Inkastoo Somaliland Nairobi ku leedahay Xafiis Ganacsi. Waxaynu u diidnay innagoo tixgelinayna Jamhuuriyada Argagixisadda ah ee Soomaaliya, Soomaaliya ayaa ku dirqiyaysa Kenya in aanay xidhiidh la sameynin Somaliland,”ayuu yidhi Dr. Ekuru Aukot.
Siday Faafisay Wakaallada Wararka Somaliland (SOLNA) oo soo xigatay Telefishanka Ebru TV, Hoggaamiyaha isbahaysiga Thirdway Alliance, ayaa sheegay in dhibaatooyinta ay Kenya kala kulmayso Soomaaliya sii soconayso illaa ay Dawladda Kenya xoojinayso cilaaqaadka ay la leedahay Somaliland isla markaana ay ciidammadeeda kala soo baxdo Soomaaliya.
Dr. Ekuru Aukot wuxuu sheegay in xudduuda u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya aan wax calaamad ah lagu sameyn wixii ka dambeeyey markii ay dalalkaasi madax-bannaanida qaateen, waxaanu ku adkaystay in xalka kaliya ee muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya lagu xalin karo Maxkamadda caalamiga ah oo si rasmi ah uga garnaqda muranka xiisadda diblomaasiyadeed dhaliyey ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.
“Dalka Iyo Golaha Wakiiladda Ayaa Ii Baahan. Qof Khibrad Badan Oo Aqoon Badan Ayaan Ahay. Cid Kasta Anaa Kaga Haboon Xilkaas, Xitaa Diblomaasi Ayaan Ahay..” Faratoon